Shan Biyood oo Dheeraad ah - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » WAXYAABAHA CAAFIMAADKA • beauty • DARYEELKA CAAFIMAAD • Daawooyinka dabiiciga ah • daryeelka »Shan dabeeco oo dabiiciga ah ee finanka
Shan dabeecadood oo dabiiciga ah ee finanka
Maqaarka finanku waxay si dhakhso ah u noqon karaan cabsi khaas ah haddii ay caadi yihiin! Halkan waxaa ah shanta dabiiciga ah ee dabiiciga ah si loola dagaallamo ladnaantaas.
Dhaqdhaqaaqyada yar yar iyo kuwa waaweyn, jidka, ma soo dhaweynayaan maqaarkeenna. Si loola dagaallamo si wax ku ool ah finanka, alaabooyinka warshadu maaha mid aad u ixtiraamaya maqaarkeenna. Halkan waxaa ah shan hab oo dabiici ah.
1. Yaanyo ama liin
Tamaandho waa antioxidant, laakiin sidoo kale waa shibaar argagax leh si loola dagaallamo finanka.finan kuwaas oo mararka qaarkood nala soocaya - gaar ahaan marka la geliyo sanka ama dhexda hore ee wejiga. Wixii iskadiidan, waa sahlan: gooyaa yaanyo (ku habboon beeraha) googo gasho kana codso wajigaaga ilaa labaatan daqiiqo. Biyo diirran raaci. Maqaarkaagu waa mid caafimaad leh oo nadiif ah!
Haddii maqaarkaaga uusan ahayn mid xasaasi ah, u tag liinta. Wuxuu nadiifiyaa oo u shaqeeyaa sida bakteeriyada. Isticmaal suufka suufka oo lagu qooyey casey liimi ah oo la shiiday, ku rid dhawr dhibcood meelaha meelaha lagu daaweeyo. Waa wax yar tickling? Waa caadi. U daa daqiiqado yar kadibna biyo raaci biyo raaci.
2. Dhinaca dhinaca saliidda cuntada
Xalalka kale ee dabiiciga ah iyo xalalka dabiiciga ah waxaa laga helaa saliida qudaarta iyo saliidaha lagama maarmaanka ah Si arrintan loo sameeyo, ku dar saliidda khudradda ah jojoba, nigella ama foosto,laba dhibcood oo saliideed muhiim ah geedka shaaha oo codso badhamada. Saliidaha lagama maarmaanka ah laurel, lemongrass ama lavender ayaa sidoo kale lagu talinayaa. Waxaad u isticmaali kartaa si kale.
3. Khaliijka cider
Waxaan had iyo jeer ka hadalnaa geedo khafiif ah daaweynta dabiiciga ah ama cuntada sida ayeeyo u tahay. Caadi ahaan, waa badeeco ku habboon oo nadiifisa aagga si loo daweeyo. Iyada oo suufka yar ama suufka qoyan lagu qooyey qalkaan, ku rid dhawr dhibcood oo ku yaala dunta ama meelaha ay saameeyeen finanku. U istaag oo ku dhaq biyo kulul.
Ujeedada cayaarta ayaa sidoo kale sidoo kale ah in la yareeyo ama xitaa gabi ahaanba laga tirtiro alaabada (juusiska, maskadaha iyo kiriimyada noocyada kala duwan) degrease, dhuuban, maqaarkaagu aad u xoog badan illaa iyo inta laga mamnuucayo filinka hidrolka difaaca.
4. Daryeelka ku salaysan caleenta cagaaran
Dhoobo cufan, la jajabiyey ama loo istcimaalay dhoobo cagaaran waa mid ka mid ah fasalada daawada jilicsan iyo dabiiciga ah waxayna leedahay booskeeda farmashiyahaaga. Haddii aad doorato dhoobo aad u budo ah, ku qas biyo (oo leh qoryo alwaax ah iyo bir aan biri lahayn, taasi waa muhiim).Marka ay joogtadu tahay mid sahlan oo macquul ah, codso badhamada. U istaag ilaa dhoobada si buuxda u qalalan (dildilaaca dhoobada oo noqda mid fudud) kadibna biyo raaci biyo diirran. Nabaradu waa nadiif yihiin, badhanka, qalalan, way baabi'i doonaan!
5. La soco qaab nololeedkaaga guud
Mawjada ayaa aad ugu tiirsan nolosheena iyo cunto. Haddii ay suurtogal tahay in lagu daaweeyo degaanka, waxay faa'iido badan u yeelan doontaaCiribtirka caadooyinka xun xun si aad ugu adkeysid finanka ! Isku day diyaarsi yar oo dufan ah: hilib yar, bil ah farmaajo, shukulaatada yar (marka laga reebo shukulaatada mugdiga ah, xoog u leh kookaha).
Sigaarka iyo aalkolada laguma talin haddii midkood uu rabo inuu finanku ku dhammeeyo! Maqaarka quruxda badan, ha ilaawin waxaad si fiican u nadiifisaa (Saliidda Jojoba waxay shaqadan si fiican u qabataa) habeen walba dhaqi wejigaaga (saabuunta Aleppo tusaale ahaan). Habeenkii, maqaarkaagu ha neefsado adiga oo isticmaalaya hidrosol sahlan (tusaale ahaan kor u kac)
Niyadjabku waa sababta keenta dhimashada - Dawada